निर्वाचन Archives - Lokpati.com
Tag - निर्वाचन
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाएर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन्। लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदा काँग्रेस चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ।
सोमवार सामाजिक सञ्जालमा पौडेलले लेखेका छन्...
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले चुनावमा जान हतार गर्न नहुने बताएका छन्। शनिबार तनहुँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले चुनावमा जान कांग्रेसलाई हतार नभएको बताएका हुन्।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन्। निर्वाचन हुने नहुने टुङ्गो भने छैन। संसद् विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा विचाराधीन छन्। नेपाल...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनः उम्मेदवारी मनोनयन आइतबार
काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदै छ। दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर रिक्त हुन लागेका १९ सदस्यमध्ये १८ पद निर्वाचनबाट र एक पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर पदपूर्ति...
निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन मिति प्रस्ताव
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य चयनका लागि निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार राजनीतिक दलहरुसँग सर्वपक्षीय छलफल गरेपछि आयोगले माघ ९ गतेका लागि निर्वाचन गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको...
एनआरएनएको निर्वाचनकाे केन्द्रिय अध्यक्षमा कुमार पन्त नै किन ?
काठमाडाैं । गोरखाको फुजेलमा सामान्य परवारमा सन् १९७६ मा जन्मिनुभएका कुमार पन्त तिक्ष्ण बुद्धि, शालीन तथा आज्ञाकारी बालब्यक्तित्व उहाँको असल परिचय थियो । अवसरको खोजीमा सपनाको सानो पोको बोकि सन्र १९९७ तिर जर्मन छिरेर जिवन एक...
एनआरएनए अस्ट्रिया निर्वाचनमा विनाेद चाैलागाईंकाे नेतृत्व विजयी
काठमाडाैं, १० साउन । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुकाे साझा संगठन एनआरएनएकाे निर्वाचन विभिन्न देशमा भइरहेकाे छ । यसै क्रममा अस्ट्रियामा पनि हालै निर्वाचन सम्पन्न भएकाे छ ।
एनआरएनए संसारमा छरिएर रहेका ५० लाख भन्दा बढी...
कलाकार संघको अध्यक्षमा खड्का विजयी
काठमाडौं, २६ जेठ । नेपाल चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा रविन्द्र खड्का निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न संघको साधारण सभामा खड्का प्रतिद्धोन्दी सरिता लामिछानेलाई हराउँदै विजयी भएका हुन् ।
उनले २१८ मत प्राप्त गर्दै...
चलचित्र कलाकार संघको चुनाव भोलि, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, २४ जेठ। नेपाल चलचित्र कलाकार संघको चुनाव जेठ २५ अर्थात भोली हुने भएको छ। गतवर्ष चैत २३ गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएपछि, अन्ततः शनिबार निर्वाचन हुने पक्का भएको हो।
शुरुमा अध्यक्ष पदका लागि कलाकार तथा निर्देशक लय...
कांग्रेस जीतमा मात्तिने र हारमा आत्तिने पार्टी होइन : प्रवक्ता शर्मा
काठमाडौं। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले अर्को चुनाव जित्ने बताएका छन्। इतिहासमा एकपछि अर्को लगातार चुनाव नहारेको स्मरण गराउँदै उनले अबको चुनाव कांग्रेसले नहार्ने बताएका हुन्।
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सको आइपीओ निस्काशनको तयारी
‘विप्लव’ नेकपाका दुई कार्यकर्ता पक्राउ
सेयर जस्तै ‘ल्याण्ड मार्केट’ स्थापनाको तयारीमा सरकार
चुनावको गाडी कुदाउने रहरले झन् ठूलो दुर्घटना ल्याउनेछः भट्टराई
आजबाट शेयर बजारमा ‘टी प्लस टु’ लागु हुने